9 Siyaabood oo ay lacagtu kuugu badaneyso hadii aad caadeysato - iftineducation.com
9 Siyaabood oo ay lacagtu kuugu badaneyso hadii aad caadeysato
iftineducation.com – Kuligeen wa jacelnahay inaa lacagteena aruursano ama ilaashano, laakinse waa mid aan sahlaneyn oo aadan iska celin karin inaad qarshageesid.
Hadaba waxa idin soo aruurinay 10 siyaabood oo qof walbe lacagtiisa ku ilaashan karo asagoon ka baahneyn.
1. Iska Bixi Deynta
Hadaad isku dayeysid inaad lacag keydsatid balse deyn badan aad dad ama bank ka qabtid taasi wey kugu adkaneysa. Hadaba waqti isa sii aad ku bixisid deymaha marka hore, markad iska dhameysid bilow inaad lacag keydsatid.
Hadaadan aaminsaneyn fikradan waxad xisaabisa lacagtad deynta ku bixisid bil walba taasoo iskugu soo biyo shubaneysa inaad u shaqeysid deyn iska bixin oo kaliya.
2. Qoondeey Intaad Keydin Laheeyd Bil Kasta
Qiimo u xadid intaad keydin laheyd bil walba, ha ka dhigin lacag badan oo hadhow kugu adkaata inaad keydin weyso. Shan Dollar hadaad ka jarto raatibkaaga mar walba lacag qiimo weyn ayey noqoneysa sanadkii.
3. Nafta Qanci
Marnaba ha keydin lacag naftaada aad ugu baahantahay sida caafimaad ahaan ama cunto. Had iyo goor caafimaadkaga ka hor mari lacagtad rabtid inaad keydisid oo waxad yeelata dhakhtar khaas ah. Hadey suurta gal tahayna waxad u qoondeysa lacag caafimaadkaga aad meel u dhigtid.
4. Balwada iska Dhaaf
Balwadu waa mid gabagabeysa nafsada bani’aadanka hadaba hadaad balwad leedahay ka tasho saad iskaga dhaafi laheyd oo balwadu waxey kaa dhameysa lacagtada isla markana halis galisa caafimaadkaga.
5. Fasaxaga Guriga Ku Qaado
Hadaad fasax ka qaadatid shaqadada ha iska waalin oo magaaloyin kale ha u dalxiisin tasoo qarash badan kaga soo baxaayo. Waxa haboon inaad dalxiiskaga qoyskaga la qaadatid oo guriga iska joogtid saad u badbaadisid lacagta aad qarashgareyneysid.
6. Qarashgareey saad u Keydisid Lacagtaada
Tani waa mid aad u muhiim ah balse dadku badana aysan arkin, tusaali ahaan haduu nalalka guriga hadey yihin kuwo intaas kaa gubta waxad u yeerata qof ku xildheer si ay cilada u xaliyaan intaad mar walba lacag ka bixin laheed nal cusub. Hadaad leedahay baabuur intaas kaa xumaado ku tala gal inaad mid ka roon gadatid.
7. Cuntada Guriga Ka Cun
Cuntada guriga laga cuno waxey leedahay laba faa’ido, mid waa ay ka raqiisantahay tan banaanka labo waa ka caafimaad fiicantahay.
8. Lacagtada Bank Dhigo
Kulama aadan lacagtada faraha ku heyn kulama aadan qarashgareyn oo waad ka wahsaneysa ama waqtiga ku diidaya inaa doonatid. Hadaba lacagta oo bank la dhigtaa waxey kugu caweneysa inaadan wax badan ka isticmaalin.
9. Xisaabi Qarashkaga Sanadkii
Raasumaalkaga sanadki xisaabi si aad u ogaatid waxa maalayacaniga ah aad ku qarashgareysay lacagtaada, taasi waxey kugu caawineysa si aad uga feejignaatid mustaqbalka.
10. Noo sheeg siyaabo aad u keydsatid lacagtaada?
Cabdi Qeybdiid oo sheegay ka hor labaatanka bishaan in uu bilaaban doono shirka Maamul U Samaynta Gobolada Dhexe
Fanaanadan Muuqaalkan ayaa dhulka la jaray -Daawo